သ န်းေ ခါ င် ထ က် န က် တဲ့ ည - စို င်းခ မ်းလိ တ် ၊ စို င်းထီးဆို င် #109185 | Featuring
Home › Music › သ န်းေ ခါ င် ထ က် န က် တဲ့ ည - စို င်းခ မ်းလိ တ် ၊ စို င်းထီးဆို င်
သ န်းေ ခါ င် ထ က် န က် တဲ့ ည - စို င်းခ မ်းလိ တ် ၊ စို င်းထီးဆို င်
by Ko Kyaw OoDuration: 04:35
Downloading သ န်းေ ခါ င် ထ က် န က် တဲ့ ည - စို င်းခ မ်းလိ တ် ၊ စို င်းထီးဆို င် mp3 on this site is just for review purpose. If you love the song, please support the artists by buying the original CD/Cassette or buying the song from iTunes.
သ န်းေ ခါ င် ထ က် န က် တဲ့ ည
စို င်းခ မ်းလိ တ် ၊ စို င်းထီးဆို င်
အိ မ် နံဘေးက သ စ် ပ င် မှာငှ က် ဆိုးထိုးသံတွေ ကြား ရ တဲ့ အ ချိ န် တို င်းဝ ယ် ရ င် မှာေ လ ထိ တ် တ ယ် စိ တ် မှာေ လကြောက် တ ယ် ကို ယ် တ စ်ယောက် ထဲ ချ န် မ ထား နဲ့ အ ချ စ် ကလေးရ ယ်ပျော် လို့ အား မ ရ ခ င် မှာ
ကြ မ္မာဆိုးအ ငြှိုးေ တွ ဆ င် တို့ ဘ ဝ ထဲ ဝ င် ခဲ့ တ ယ် ကြ င် နာသူ မ ရှိ မ ယ့် န က် ဖြ န် ရဲ့ င ရဲ အ လ ယ် ကို ယ် တ စ်ယောက် ထဲ ပ စ် မ သွား နဲ့ အ ချ စ် ကလေးရ ယ် ရ င် ခွ င် မှာထား ကြား ကလေပြေသွေးေ တာင် မ ယုံ တ ယ် ည အမှောင်တွေ ထဲပျောက် သွား မှာကို စိုးလှ ပါ တ ယ် ရ င် ခွ င် မှာထား ကြား ကလေပြေသွေးေ တာင် မ ယုံ တ ယ် ည အမှောင်တွေ ထဲပျောက် သွား မှာကို စိုးလှ ပါ တ ယ် မခေါ် ရဲ ဘူးချ စ် သူရေ
ပြ န် မ ထူးေ တာ့ မှာလို့ ခြိ မ်းေ ခြာက် တဲ့ ဒီ အ သိ ရ ယ် ပို င် ဆို င် ချ င်သေးတ ယ် ခွဲ ခွာဖို့စောမ ယ် ဟို တ စ် ဖ က် က မ်း
အ ရ င် မ ကူးနဲ့ အ ချ စ် ကလေးရ ယ်
Watch video on Youtube: သ န်းေ ခါ င် ထ က် န က် တဲ့ ည - စို င်းခ မ်းလိ တ် ၊ စို င်းထီးဆို င်
Search another results: သ န်းေ ခါ င် ထ က် န က် တဲ့ ည - စို င်းခ မ်းလိ တ် ၊ စို င်းထီးဆို င်